निर्माणसम्पन्न नभई सडक उद्घाटन - Tesro Ankha
दुर्छिम (खोटाङ) । स्थानीय सरकारका माननीय भन्दैमा जे पायो त्यही काम गर्न पाइन्छ कि नाइँ ? पाइँदैन भने निर्माणसम्पन्न नभई सडक उद्घाटन गर्न पाइन्छ ? पाइँदैन भने त्यस्ता माननीयलाई स्थानीय सरकारले कस्तो कारबाही गर्लान् ? पर्खिनैपर्ने भएको छ ।
प्रसंग– बोझे–दाम्दले–हैदे–सुनकोसी ग्रामीण सडक उद्घाटनको हो । प्रदेश सांसद राजन राई र पूर्वसभासद् पाँचकर्ण (पीके) राईले सो सडक उद्घाटन गरेका थिए । २०७५ चैत ३० गते उद्घाटन गरिएको सो सडक निर्माणसम्पन्न भएको छैन ।
निम्ता गरिए पनि सांसद विशाल भट्टराई सडक उद्घाटनमा गएनन् । सडक उद्घाटनको अघिल्लो दिन सांसद भट्टराई हलेसीमै थिए । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका प्रमुख इबन राईसमेत सडक उद्घाटनमा पुगेनन् ।
राजा नहुँदैमा राजकाज रोकिन्छ र ? भन्ने नेपाली उखान प्रचलित छ । सांसद भट्टराई र नगरप्रमुख राई सडक उद्घाटनमा नपुगे पनि बहालवाला प्रदेश सांसद राजन राई र पूर्वसभासद् पाँचकर्ण (पीके) राईले संयुक्त रूपमा सडक उद्घाटन गरे । सडक उद्घाटनमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका नेकपा संयोजक सुरेन्द्रकुमार राई, नेकपा नेता खडेन्द्र राईलगायत स्थानीय नेताको उपस्थिति थियो । सर्ट–पाइन्ट, कोट र टोपीमा ठाँटिएका हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–५ दुर्छिम वडाध्यक्ष रमेश तिवारी सडक उद्घाटनको समय सबैभन्दा प्रसन्न देखिन्थे ।
निर्माणसम्पन्न नभई सडक उद्घाटन गरेको फोटो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा वडाध्यक्ष तिवारीको उछित्तो काढिएको थियो । ‘निर्माणसम्पन्न नहुँदै छापामार शैलीमा सडक उद्घाटन ः बोझे–दाम्दले–हैदे–सुनकोसी ग्रामीण सडक प्राविधिक मूल्यांकन फाराम नभरी, सम्बन्धित निकायले अनुगम नगरी, सार्वजनिक सुनुवाइ नभई, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन नबनाइ हचुवाको भरमा नियमविपरीत सडक उद्घाटन गर्न लगाउने हतुनपा–५ का वडाध्यक्ष गलत छन्,’ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ हलेसीका मनोज गिरीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यसबारेमा वडा नम्बर ५ का वडाप्रमुखले निर्माणसम्पन्न नभई, आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी सडक उद्घाटन किन गर्नुभयो ? यसो गर्न मिल्छ र ? भन्ने प्रश्नमा उनले त्यसो गर्न मिल्दैन, अहिले अनौपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिएको हो । पछि फेरि औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिन्छ भन्ने उत्तर दिए । एउटै सडकको उद्घाटन पटक–पटक अनौपचारिक र औपचारिक हुँदैन भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ । अरूलाई नियमसंगत बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जनप्रनिधि भएर आफैं नियमविपरीत जानु राम्रो हुँदैन । विवेक प्रयोग गरेरमात्रै निर्णय लिन सुझाव । नयाँ वर्ष प्रारम्भसँगै हामी सबैको सत्कर्म गर्ने सोच बनोस् । नयाँ वर्षको सबैलाई शुभकामना ।’
हो, बोझे–दाम्दले–हैदे–सुनकोसी ग्रामीण सडक निर्माणसम्पन्न भएको छैन । सडकको काम कस्तो भयो ? कति बजेटको काम भयो ? कसले अनुगमन ग¥यो ? गुणस्तर कस्तो थियो ? भन्नेमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका अनभिज्ञ छ । प्राविधिक प्रतिवेदनविना नै सडक उद्घाटन गरिएपछि नगरसम्बद्ध प्राविधिक तीनछक परेका छन् ।
निर्माणसम्पन्न नगरी सडक उद्घाटनपछि हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–५ दुर्छिमका वडाध्यक्ष रमेश तिवारीलाई टेलिफोन गर्दा टेलिफोन वार्तामा अवरोध भएपछि एसएमएस गरिएको थियो । निर्माणसम्पन्न नगरी सडक उद्घाटन गर्नुभयो । यो निमयसंगत भयो र ? भन्दै वडाध्यक्ष तिवारीको मोबाइल नम्बर ९८५१२१५३३० मा एसएस पठाइए पनि उत्तर आएन ।
यही विषयमा जानकारी लिन टेलिफोन गर्दा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका प्रमुख इबन राईको मोबाइल स्वीचअफ थियो । मेयर इबन राईको सचिवालयले नगरप्रमुख बिरामी परेकाले मोबाइल अफ भएको जानकारी गरायो ।
२०७६ बैशाख २५ ००:०९